Yiza umthandazo oyingcwele Discover ➡️ Discover Online Online ➡️
Kubo bonke abantu, umoya oyingcwele ubonakaliswa ngokucacileyo nguThixo. Sithandazela ukuba sikwazi ukudibana nomdali wethu, sicele abo sibathandayo, ukuba banikwe esikufunayo kwaye siphile ngoxolo. Unxibelelwano neNkosi yinto ekufuneka siyomelezile ukuze sonwabe. Ke ngoko, apha siyakubonisa vngomthandazo womoya oyingcwele, Umthandazo onamandla wokunxibelelana kwakhona noThixo.
1 Umthandazo yiba ngumoya oyingcwele, uve ukholo kwakhona
2 Ngubani umoya oyingcwele?
3 Umoya oyingcwele, ngokwebhayibhile
4 Ezinye iimpazamo malunga nomoya oyingcwele
Umthandazo yiba ngumoya oyingcwele, uve ukholo kwakhona
Ngamanye amaxesha, ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, ukholo lwethu luba mnyama kwaye siyamfulathela uThixo. Siyalibala ukuba, ngaphandle kwayo, mininzi imiqobo esingenakukwazi ukuyoyisa, ukuba ubukho bethu buncitshisiwe baba yinto ethile, ngaphandle kwesizathu. Sidalwe ngokomfanekiselo nangokufana noThixo weNkosi yethu, sanikwa ubomi ukuze sibonwabele ubumnandi, incasa yazo, ukufezekiswa kweenjongo zethu kunye nempumelelo.
Apha sikubonisa, ukunxibelelana kwakhona noThixo, ubuva ubukho bakhe kwaye uhlaziye ukholo lwakho, ukuze abo bakungqongileyo banokudibana noThixo, umthandazo yiza umoya oyingcwele:
«Yiza uMoya oyiNgcwele
Gcwalisa iintliziyo zabanyanisekileyo bakho
kwaye ujike kubo
umlilo wothando lwakho.
Thumela, Nkosi, uMoya wakho.
Yanga ingahlaziya ubuso bomhlaba.
ukuba uzigcwalisile iintliziyo zakho
Ndithembekile ngokukhanya koMoya
Ngcwele; sinike ukuba,
nikhokelwa kwangulo Moya.
masiziva sinobulungisa kwaye
masisoloko sonwabela intuthuzelo yakho.
NgoYesu Krestu iNkosi yethu.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ukuthandazela umoya oyingcwele, siyakumema ukuba ufunde i Umthandazo onamandla womoya oyingcwele womeleza umoya.
Ngubani umoya oyingcwele?
Kudala sive malunga nomoya oyingcwele kunye namandla awo. Sithandazile kweli nani, ukuba asinako ukujonga, ukuba sive kuphela. Nangona kunjalo, ngokufundwa kweBhayibhile, ngento esiyivileyo, siye satolika ukuba ngumntu, umntu osikhathaleleyo kwaye osinika amandla kule mingeni sijongene nayo ebomini bethu.
Nangona singaphazami xa sitolika ukuba ingomntu othile, enyanisweni imalunga nento ethile. Le nto iyinxalenye kaThixo. Xa sithetha ngomoya oyingcwele, eBhayibhileni, sinokuqaphela ukuba imalunga nezinto ezininzi, kodwa isoloko ibhekisa kuyo amandla kaThixo okanye amandla akho. Okwangoku sithandaza kuThixo kwaye sicele usapho, abahlobo, abantu esibaqhelileyo kunye nathi, siziva amandla athile ebesingenawo ngaphambili. Kwakhona, siqaphela izinto ezenzekayo ebesingacingi ukuba ziya kwenzeka.
Ngamafutshane, umoya oyingcwele ngamandla kaThixo iNkosi yethu. Kwibhayibhile Engcwele, igama elithi "umoya" livela kwizinto ezimbini: uxolo (ngesiHebhere) kunye pneuma (eGrisi). Oku kubhekisa kukufikelela kukaThixo, kumoya wakhe oyingcwele, amandla ajonga ukuthanda kwakhe ukuba kwenziwe.
Umoya oyingcwele, ngokwebhayibhile
Ngokwezibhalo ezingcwele, umoya oyingcwele ufana nezandla, iminwe okanye ukuphefumla kukaThixo, umdali wethu. Oko kukuthi, ngokungathi zizandla zomsebenzi, lo moya awusebenzi ngokwawo, kodwa xa uThixo esenza isigqibo. Umoya oyingcwele wasetyenziselwa ukwenza oku kulandelayo:
Ukuze abakhonzi bamandulo bashumayele kwaye benze imimangaliso.
Ukuze abantu abamthobelayo babonakalise iimpawu ezintle.
Ibhayibhile ikwathelekisa umoya oyingcwele namanzi kwaye uyinxulumanisa nokholo nolwazi. Konke oku kuthetha ukuba ibhayibhile, nangona kwezinye iindawo zayo ichaza umoya oyingcwele ngokungathi ngomnye umntu, enyanisweni umalunga nento engabonakaliyo. Yinto esingayiboniyo, esingayibambiyo, kodwa evelisa iziphumo ezibonakalayo.
Ezinye iimpazamo malunga nomoya oyingcwele
Ngenxa yendlela ibhayibhile eveza ngayo umoya oyingcwele, kukho inani leekhonsepthi abantu abacinga ukuba ziyinyani, ngokusekwe kwinto abayiqondayo kwisicatshulwa. Nangona kunjalo, oku akunjalo kwaye yiyo loo nto apha sikubonisa ezinye iingcamango eziphosakeleyo abanye abantu banayo malunga nomoya oyingcwele, emva kokufunda ngayo kwezinye iinguqulelo zebhayibhile:
Umoya oyingcwele umelwe njengomntu kwaye uyinxalenye kaThixo Oziqu Zithathu. KuYohane oku kuyaqondakala, ngakumbi ku-5: 7, 8 kwiinguqulelo zeBhayibhile, ezinje nge Amat Towers kunye U-Queen valera.
Ingcaciso: Inguqulelo Amat Towers Ithi kuYohane 5: 7, 8 oku kulandelayo:
"Bathathu abo bangqinayo ezulwini: uYise, uLizwi, noMoya oyiNgcwele; aba bathathu banye. Kwaye abathathu, ngabo abangqinayo emhlabeni".
Abanye abaphandi abaphambili bafumanisa ukuba uMpostile uJohn akazange abhale la mazwi kwaye ke akufuneki ukuba abekho eBhayibhileni.
IZibhalo eziNgcwele zibhekisa kuMoya oyiNgcwele njengomntu, ngokuvakalayo, kufanelekile ukuba kube njalo
Ingcaciso: Kwibhayibhile, ngamanye amaxesha, umoya oyingcwele kuthethwa ngaye ngokungathi ibingumntu, nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba unguye. Kukwanjalo nobulumko, ukufa kunye nesono kwiMizekeliso 1:20 nakumaRoma 5:17, 21. Umzekelo, isono sichazwa eBhayibhileni njengokunyoluka, ukulukuhla nokubulala, ngakumbi kuMateyu 11:19; ULuka 7:35 kunye namaRoma 7: 8, 11. Nangona kunjalo, kuyaziwa ukuba ayingomntu.
Ubhaptizo lwenziwa egameni lomoya oyingcwele. Ngoko umoya kufuneka ube ngumntu.
Ingcaciso: Ngamanye amaxesha iBhayibhile isebenzisa ibinzana elithi "egameni lika" kwaye yenza njalo ukubonisa ukuba into yenziwa ngegunya elinikiweyo. Nangona kunjalo, sihlala silisebenzisa eli binzana kwiimeko ezahlukeneyo, umzekelo, "egameni lomthetho"; Oku akuthethi ukuba umthetho ngumntu, yinto elawula kwaye ilawula indlela yokuziphatha kwabantu eluntwini.
Abapostile nabafundi bakaYesu babekholelwa ukuba umoya oyingcwele ungumntu.
Ingcaciso: Ayisiyonyani le, ayisiyiyo into ene-endorsement kwibhayibhile okanye kwimbali, kuba akukho ndawo ikhankanyiweyo. Emva koko sicaphula oko IEncyclopædia Britannica:
"Imfundiso yokuba uMoya Oyingcwele wayengumntu ohlukileyo nendalo yobuThixo […] yachazwa kwiBhunga laseConstantinople ngo-381 AD."
Elo bhunga ulikhankanyileyo lalibhiyozelwa ngaphezulu kwenkulungwane ezimbini ezinesiqingatha emva kokusweleka kompostile wokugqibela. Ke ngoko, bubuxoki.